Mpaghara ihu igwe nke ụwa | Network Meteorology
Mpaghara ihu igwe na ụwa
Ihe onyonyo a na-ama ugwu onodu ubochi di iche iche, ocha bu mpaghara oyi, acha anụnụ anụnụ nke subpolar zone, lilac the tundra zone, green the temperate zone, yellow the subtropical zone, and pink the tropical zones.
Anyị nwere ihu ọma ibi n’ụwa ebe ọtụtụ ụdị ndụ dị iche iche dị. Immụ anụmanụ na osisi ndị na-ebikọ ọnụ n'ụzọ kachasị mma: ịgbakwunye ibe ha, na-enyere ibe ha aka - ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta n'amaghị ya - nke mere na mmadụ niile, dị ka ụdị, ga-anọgide na-adị.
Anyị ji ụgwọ a dị iche iche na mbara ala n'onwe ya. N'ịbụ ndị e mere ka ha dị ka ọdịdị ala, ụzarị anyanwụ adịghị erute n'akụkụ ahụ dum n'otu aka ahụ, n'ihi ya, usoro mgbanwe ndị a pụrụ iche nye onye ọ bụla dị ndụ. N'ihi gịnị? Gịnị kpatara 'Swa climwa Ihu Igwe nwere agwa nke ha.
1 Mmetụta nke ụzarị anyanwụ na ụwa
1.1 Mmeghari nke uwa
1.2 Kedu ka ụzarị anyanwụ si erute ?wa?
2 Mpaghara ihu igwe
2.1 Mpaghara Tropical
2.2 Mpaghara mpaghara
2.3 Mpaghara na-agwụ ike
2.4 Mpaghara subpolar
2.5 Mpaghara Tundra
2.6 Mpaghara oyi
Mmetụta nke ụzarị anyanwụ na ụwa
Tupu anyị agaa n’isiokwu dị ugbu a, ka anyị buru ụzọ kọwaa mmetụta ụzarị anyanwụ nwere na ụwa anyị, na otu ha si abata.
Mmeghari nke uwa
Iswa bu oke ohia nke di ka anyi mara n’agha n’aghari. Mana ọ bụghị otu mgbe niile, n'ezie, a na - achọpụta ụdị anọ:
Kwa ụbọchị (ma ọ bụ, karịa ka ọ dị, kwa awa iri abụọ na atọ na nkeji 23) Earthwa na-agbagharia n’usoro ya, na mpaghara ọdịda anyanwụ. Ọ bụ nke anyị na-ahụkarị, ebe ọ bụ na ọdịiche dị na ehihie na abalị buru oke ibu.
Kwa ụbọchị 365, awa 5 na minit 57, mbara ụwa na-agagharị na Sun otu ugboro. Otu ọ dị, n’oge ahụ enwere ụbọchị anọ ga-adị oke iche:
Machị 21st: ọ bụ spring equinox dị na mgbago ugwu ụwa, yana ụbịa equinox na mpaghara ndịda.
22 nke June: Oge ahụ bụ sọsọ ụsọ mmiri na mgbago ugwu, na sọsọ udu mmiri na mpaghara ndịda. Daybọchị a ụwa ga-eru ebe kachasị anya ya site na anyanwụ, ọ bụ ya mere eji mara ya dị ka aphelion.
September 23: ọ bụ mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ nke mgbụsị akwụkwọ mgbago mgbago ugwu, na opupu ihe ubi nke ọdịda anyanwụ na mpaghara ndịda.
Disemba 22th: Ọ bụ oge udu mmiri n’oge ụsọ mmiri, na udu mmiri n’oge ụsọ mmiri n’ebe ndịda. Bọchị a ụwa ga-eru oke nso na kpakpando eze, nke mere eji mara ya dị ka perihelion.
Thewa anyị bi na ya bụ ellipsoid nwere ọdịdị na-adịghị mma na-agbanwe site na mma ndọda nke eze kpakpando, ọnwa na, n'agbanyeghịkwa na obere, nke mbara ala. Nke a na-akpata sways na ya axis nwayọọ nwayọọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịghọta, n'oge ntụgharị asụsụ akpọ »precession nke equinoxes». N'ihi ha, ọnọdụ nke osisi nke eluigwe gbanwere n'ime ọtụtụ narị afọ.
O bu azu azu ihu na azu nke uwa. Dị ka ọ na-adịghị okirikiri, ihe na-adọrọ adọrọ Ọnwa na ntopita nke ikuku na-akpata mmeghari a.
Kedu ka ụzarị anyanwụ si erute ?wa?
Dika mbara ala kariri ma obu ihe di ala karie ma buru n'uche ihe ngaghari ya na ubochi na onwa, Anyanwu anwu adighi erute otu akuku uwa nile. N'ezie, ka mpaghara ahụ si na eze kpakpando pụta, na ịbịaru nso na okporo osisi nke Earthwa, ụzarị ọkụ ga-adị obere. Dabere na ya, mpaghara ihu igwe dị iche iche amalitela.
Mpaghara ihu igwe
A na-ekpebi ihu igwe site na mpaghara ihu igwe dị ka okpomọkụ, iru mmiri, nrụgide, ifufe, na mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche naanị ọnọdụ okpomọkụ, akọwapụtara mpaghara ka enwetara dịka usoro nhazi ọkwa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, na usoro Köppen mpaghara isii ihu igwe dị iche iche dabere na ọnọdụ okpomọkụ n'oge ọ bụla:
Ebe ndị a nwere a ebe okpomọkụ, nke a na-ahụ na mpaghara mpaghara etiti site na 25º ugwu latitude na 25º latitude south. Ogologo okpomọkụ dị elu karịa 18ºC. Nke a apụtaghị na ntu oyi enweghị ike ịpụta, nihi na ha na-eme n’ugwu ndị dị elu ma mgbe ụfọdụ n’ọzara; nanso, bere a onuawa bi reka ne gyidi ho asɛm no, n’abam bui.
Ihu igwe a Ọ bụ n'ihi nkuku nke ntụgharị anyanwụ nke na-eme na mpaghara ndị a. Ha na-abata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ ọ bụla, nke na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị elu ma ọdịiche diurnal dịkwa oke. Na mgbakwunye, ekwesiri ịsị na ikuku bụ ebe ikuku oyi si n'otu ala na-ezukọ na ifufe na-ekpo ọkụ site na nke ọzọ, nke na-ewepụta ọnọdụ nke nrụgide dị ala mgbe niile a na-akpọ mpaghara njikọta njikọta, nke mere na mmiri na-ezo mgbe niile maka ọtụtụ n'ime oge nke afọ.
Ebe ndị a nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ, nke a hụrụ na mpaghara ndị dị nso na Tropics of Cancer and Capricorn, dị ka New Orleans, Hong Kong, Seville, Sao Paulo, Montevideo, ma ọ bụ Canary Islands (Spain).
Kwa afọ nkezi okpomọkụ adịghị ada n'okpuru 18ºC, na nkezi okpomọkụ nke ọnwa kachasị oyi nke afọ bụ n'etiti 18 na 6ºC. Mildfọdụ frosts dị nwayọọ nwere ike ịpụta, mana ọ bụghị ihe a na-emebu.
Mpaghara na-agwụ ike
Puig Major, na Mallorca.
Mpaghara a nwere ihu igwe dị jụụ, nke a hụrụ na ebe dị elu ebe okpomọkụ na-ajụ oyi karịa mpaghara dị ala n'otu ohere ahụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa 10ºC n'ime ọnwa kachasị ọkụ, yana n'etiti -3º na 18ºC n'oge ọnwa oyi.
Enwere oge anọ akọwapụtara nke ọma: oge ​​opupu ihe ubi nwere okpomọkụ nke na-abawanye ka ụbọchị na-aga, oge ọkọchị nwere nnukwu okpomọkụ, ụbịa na okpomọkụ na-agbadata ka ụbọchị na-aga, na oge oyi nke ntu oyi nwere ike ịpụta.
Mpaghara a nwere ihu igwe subpolar, nke a maara dị ka subarctic ma ọ bụ subpolar. Ọ dị n'etiti 50º na 70º ohere, dị ka ọ dị n'ọtụtụ Siberia, mgbago ugwu China, ọtụtụ Canada, ma ọ bụ n'ọtụtụ Hokkaido (Japan).
Ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịdaba na -40ºC na ọkọchị, nke bụ oge na-ewe site na 1 ruo ọnwa 3, gafere 30ºC. Ogologo okpomọkụ bụ 10ºC.
Polar bear na Alaska.
Mpaghara a nwere ihu igwe tundra ma ọ bụ ihu igwe alpine. A hụrụ ya na Siberia, Alaska, ugwu Canada, ndịda Greenland, ụsọ mmiri Arctic nke Europe, mgbago ndịda nke Chile na Argentina, na mpaghara ụfọdụ nke ugwu Antarctica.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere okpomọkụ, nkezi oge oyi kacha nta bụ -15ºC, n'oge obere oge ọkọchị ha nwere ike ịdị iche site na 0 ruo 15'C.
Mpaghara a nwere a ihu igwe glacial, ma a na-ahụ ya na Arctic na Antarctica. Ihu igwe na ebe ndị a dị ezigbo oyi, ọkachasị na Antarctica ebe edere ọnọdụ okpomọkụ nke -93,2ºC ebe ọ bụ na ụzarị anyanwụ na-abata n'ike.
Na nke a anyị ji agwụ. Anyị nwere olile anya na ọ bụrụla nke mmasị gị. 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Mpaghara ihu igwe na ụwa